Mpanamboatra fiara - Mpanamboatra fiara mpamokatra fiara mpamokatra fiara China
Fonony ambany sy fonony ambany ny maso Control Unit
✭ Ity ampahany plastika ity no ampahany lehibe amin'ny fonony ambany an'ny Unit Control and Charge Connector.
✭Ny fitaovana ampiasaina amin'ity ampahany plastika ity dia ireo fitaovana ABS fireproof, Ity ampahany plastika ity dia ny ampahany miseho amin'ny vokatra ary ampahany amin'ny fivoriambe manan-danja. Mifamatotra tsara amin'ny akorandriaka afovoany misy voanjo varahina 6, ary mila mandalo fitsapana mitete 5 metatra.
✭Ity fitaovana ABS tsy misy afo ity dia nahatratra ny haavon'ny V0, miantoka ny fiarovana sy ny filaminana mandritra ny famahana ny on-board. Ny lasitra plastika amin'ity ampahany plastika ity dia vita amin'ny lasitra telo-lovia. mpihazakazaka mangatsiaka amin'ny teboka afovoany, ity tombony ity dia mety hahatonga ny tsindrona vokatra manontolo hitovy fa tsy ho mora simba.
✭Ity andiana lasitra fanindronana ity, 500 000 heny ny androm-piainantsika. Ny fanitsiana eo anelanelan'ny vokatra dia natao tamin'ny voanjo varahina be loatra. Ny voanjo varahina dia apetraka ao anaty lasitra ary avy eo atsindrona. Izy io dia miantoka fa ny voanjo varahina dia azo miraikitra tsara amin'ny ampahany plastika.
✭Raha manana vokatra mitovy amin'izany ianao, azafady Aza misalasala mifandray aminay. Ho mpiara-miasa aminao indrindra izahay.
✭ Ity dia ampahany plastika voaisy tombo-kase ao anaty fiara, mampiasa hafanana avo lenta sy fitaovana plastika PA66 + 30% maharitra. Ny mari-pana momba ny tontolo iainana amin'ity faritra ity dia eo anelanelan'ny -40 sy +100 degre. Mifanohitra amin'ny toetrandro any ivelany izy ary mahafeno ny fenitra 50185 an'ny Volkswagen.
✭ Ity ampahany plastika ity dia ampahany amin'ny sivana solika plastika plastika avy amin'ny mpanjifa Alemanina. Ny sarotra indrindra amin'ity faritra ity dia ny 0.45mm ny hatevin'ny rindriny. Ity andiana bobongolo ity dia mandray ny fenitra HASCO. Ny akora fototra dia vy vy nohamafisina 1.2343 (ESR).
✭ Ny firafitry ny bobongolo dia tsotra ihany, miaraka amina rafitra roa mampiditra inser Becu. Ny vokatra dia PA6 + 30GF, ary ny faritra tokony ho VDI-24. Ny fepetra takiana amin'ny haben'ny vokatra dia +/- 0,05. Ny ora fanaterana bobongolo dia 45 andro, ary ny tsingerin'ny tsindrona dia 12 segondra. Ny bobongolo dia nosedraina indroa fotsiny, ary nangataka anay ny mpanjifa handamina fanondranana any amin'ny orinasa famolavolana tsindrona Alemanina.
Buffer amin'ny zoro
✭ Ity dia ampahany plastika buffer an'ny Angle ho an'ny Volkswagen, amin'ny fampiasana fitaovana plastika PA66 + 30% mahazaka hatsiaka. Ny mari-pana momba ny tontolo iainana amin'ity faritra ity dia eo anelanelan'ny -40 sy ny +150 degre. Mifanohitra amin'ny toetrandro any ivelany izy ary mahafeno ny fenitra 50185 an'ny Volkswagen.
✭ Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny toeran'ny sokajy fiara mba hampiorina sy azo itokisana ny ampahany amin'ny fiara. Ity andiana bobongolo ity dia mandray ny fenitra HASCO. Ny akora fototra dia vy vy mafy 1.2344 (ESR).
✭ Ny firafitry ny bobongolo dia tsotra ihany, miaraka amina rafitra roa mampiditra inser Becu. Ny vokatra dia PA6 + 30GF, ary ny faritra tokony ho VDI-21. Ny fepetra takiana amin'ny haben'ny vokatra dia +/- 0,05. Ny ora fanaterana bobongolo dia 30 andro, ary ny tsindrona tsindrona dia 30 segondra. Ny lasitra dia mampiasa mpihazakazaka INCOE mafana ho mpihazakazaka mangatsiaka ho an'ny vavahady ambany. Ny bobongolo dia nosedraina indroa fotsiny, ary nangataka anay ny mpanjifa handamina fanondranana any amin'ny orinasa famolavolana tsindrona Alemanina.
✭ Azontsika atao ny manamboatra karazana lasitra aroloha isan-karazany araky ny takian'ny mpanjifa, ny teny nalaina dia azo omena mifototra amin'ny sary na santionan'ny mpanjifa. ny bobongolo dia sady tsara kalitao no vidiny mirary.
✭ Ity ampahany plastika ity dia ampahany amin'ny fiarovan-doha amin'ny bisikileta avy amin'ny mpanjifa USA. Ity andiana bobongolo ity dia mandray ny fenitra HASCO. Ny akora fototra dia vy vy nohamafisina 1.2343 (ESR). Ny firafitry ny bobongolo dia tsotra ihany, miaraka amina rafitra fampidirana core efatra tsy miankina. Ny vokatra dia plastika plastika PP, ary tokony ho Polish600 ny etona. Ny ora fanaterana bobongolo dia 45 andro, ary ny fizarana tsindrona dia 37 segondra. Sarotra ny firafitr'ity lasitra ity, miaraka amin'ny slider efatra lehibe sy angon-drakitra roa lehibe. Ny eject dia mandray ny jacking mirona miampy tsindry block push.
✭ Ny famolavolana ny fitaterana bobongolo dia mila zaraina mitovy mba hahazoana antoka fa ny vokatra dia azo zakaina mitovy. Ataovy izay hahatratrarana ny vokatra avo lenta sy bika avo lenta.
✭ Raha manana vokatra mitovy amin'izany ianao dia aza misalasala mamela anay hanao lasitra ho anao. Ny kalitao sy ny serivisinay no tsara indrindra.
Lasitra momba ny fiara
✭ Ity ampahany plastika ity dia ampahan'ny fiara avy amin'ny mpanjifa frantsay. Ity andiana bobongolo ity dia mandray ny fenitra HASCO. Ny akora fototra dia vy vy nohamafisina 1.2343 (ESR).
✭ Ny firafitry ny bobongolo dia tsotra ihany, miaraka amina rafitra Lifters roa. Ny akora vokariny dia PA66 + 30GF, ary ny tany dia mila nohosorana # 600. Ny bobongolo de
ny fe-potoana livery dia 35 andro, ary ny tsingerin'ny tsindrona dia 32 segondra. Ny bobongolo dia nosedraina indroa fotsiny, ary nangataka anay ny mpanjifa handamina fanondranana any amin'ny orinasa famolavolana tsindrona frantsay.
Sivana menaka ccessories plastika
✭ Ny haino aman-jery sivana novolavolain'ny mpanjifa dia singa marobe misy sosona vita amin'ny vera fibre na akora sentetika izay mamela ny fifandanjana tsara indrindra amin'ny solika biolojika sy ny sombin-tsolika levona ao anaty menaka. Izy ireo dia miantoka ny fahombiazan'ny maotera avo indrindra na dia amin'ny alàlan'ny fampidirana menaka «lava», additives, mineraly ary menaka tsy mineraly ary ny fahasimban'izy ireo. Ny firafitry ny haino aman-jery sivana vaovao sy nentim-paharazana dia miantoka permeability avo lenta ary noho izany dia fatiantoka enta-mavesatra kely ao amin'ny rafitra fanosotra maotera.
✭ Ity ampahany plastika ity dia ampahany amin'ny sivana solika plastika plastika avy amin'ny mpanjifa any Italia. Ity andiana bobongolo ity dia mandray ny fenitra HASCO. Ny akora fototra dia vy vy mafy 1.2344 (ESR). Ny firafitry ny bobongolo dia tsotra ihany, miaraka amina rafitra fampidirana core efatra tsy miankina. Ny vokatra dia PA6 + 30GF, ary ny faritra tokony ho VDI-33. 40 andro ny ora fanaterana bobongolo, ary 38 segondra ny tsingerin'ny tsindrona. Ny bobongolo dia nosedraina indroa fotsiny, ary nangataka anay ny mpanjifa handamina fanondranana any amin'ny orinasa famolavolana tsindrona Italie.